Posted on September 4, 2018 by Open Hluttaw
This entry was posted in Amyotha HluttawChooseahluttaw sessionGeneralChooseahluttaw sessionHluttaw News. Bookmark the permalink.
← လွှတ်တော်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ကို အယုံအကြည်မရှိဆိုကာ တိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦး နုတ်ထွက်စာတင် | 7Day Daily – ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
အစိုးရဌာနများ ဘတ်ဂျက်ကို အမွေခွဲသလိုအပြိုင်အဆိုင်မတောင်းသင့်ဟု လွှတ်တော်အမတ်ဆွေးနွေး | 7Day Daily – ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ →